China Resin plug Hole Rogers Double faritra misy rindrina PCB Board mpanamboatra sy ny mpamatsy | Fastline
Mitarika ny harato Nebulizer Manaufacturer
Double sosona Fr4 PCB Board Layout
Radio Quick mihetsika Flex PCB
Small PCB High FABRICATION Quality FABRICATION mihetsika ...
Quick mihetsika Flex PCB Business
0.2mm Hole PCB samy hafa firenena famatrarana mihetsika -Flexible PCB ...
Gold voapetaka Rogers PCB FABRICATION Price
0.15mm Hole PCB mihetsika -Flexible PCB Board for Hobbyist
0.15mm Hole PCB Standard mihetsika-malefaka PCB Board
High Density Quick mihetsika Flex PCB
0.1mm Hole mihetsika-malefaka PCB Board Gerber board
0.1mm Hole mihetsika -Flexible PCB Board for Keypad
Professional OEM High Density Roger PCB
Custom High Density Rogers faritra PCB Board
Resin plug Hole Rogers Double faritra misy rindrina PCB Board
Ny resin plug Rogers lavaka misy rindrina avo roa heny faritra PCB birao dia vokatry izay nampiasaina tamin'ny fanaraha-maso ny orinasa. isika mifantoka amin'ny PCB sy ny PCBA indostria ho an'ny mihoatra ny 10 taona, ary indrindra ny fanompoana ny Eoropeana sy Amerikana tsena , ary koa ny avaratra sy Amerika Atsimo ary Azia Atsimo Atsinanana tsena. Manantena izahay mba hanampy anao fifaninanana mamokatra vokatra tsara eo amin'ny tsena eo an-toerana.
1.Introduction ny Resin plug Hole Rogers Double faritra misy rindrina PCB Board
Fastline faritra dia afaka manome ampahany feno sy turnkey turnkey pirinty fivoriamben'ny faritra asa birao. Fa feno turnkey, isika hikarakara ny dingana manontolo, ao anatin'izany ny fanomanana ny Natonta Circuit Boards, manampahaizana filana ny singa, mba aterineto ampy, mitohy ny fanaraha-maso ny kalitao sy ny fiangonana farany. Kosa ny ampahany turnkey, ny mpanjifa dia afaka manome ny PCBs sy ny singa sasany, ary ny sisa dia ho ampiasaina faritra eto amintsika.
Endri-javatra, ny Products Mahatsara
1. Mihoatra ny 10 taona traikefa mpanamboatra amin'ny PCB Mivoria sy saha PCB.
2. Big maridrefy ny famokarana mahatonga azo antoka fa ny fividianana vola lany dia ambany.
3. Advanced pamokarana miantoka milamina tsara sy ny fahari androm-piainany.
4. Alaharo eto ny efa misy toy ny fepetra PCB.
5. 100% fitsapana rehetra PCB vokatra namboarina.
6. iray-mijanona Service isika, dia afaka manampy ny mividy ny singa.
Lead Time PCB nitranga fahiny:
Fanamarihana: Base rehetra nandray ny angon-drakitra, ary tsy maintsy ho antsika amin'ny fomba feno sy malalaka olana, ka ento ny fotoana dia vonona ny sambo.
Mino isika fa ny toetra dia ny fanahin'ny ny orinasa sy manome fotoana-dehibe, nandroso teknolojia injeniera sy ny orinasa mpamokatra entana elektronika asa ho an'ny orinasa.
Sound toetra nahazo laza tsara noho ny Fastline. Tsy mivadika mpanjifa efa niara-niasa tamin'ny amintsika indray ary indray sy mpanjifa vaovao tonga Fastline hametraka fiaraha-miasa fifandraisana Fa handre ny laza lehibe. Tsy andrintsika ny fanatitra fanompoana faran'izay tsara ho anao!
2.Production Details ny Resin plug Hole Rogers Double faritra misy rindrina PCB Board
3. Fampiharana ry ampy Resin plug Hole Rogers Double faritra misy rindrina PCB Board
Efa nanompo avo lenta PCBA ny firenena maro, avy amin'ny mpanjifa fitaovana elektronika amin'ny fifandraisan-davitra, angovo vaovao, aerospace, fiara, sns
4. fahaizana ny Resin plug Hole Rogers Double faritra misy rindrina PCB Board
Efa nametraka departemanta iray voatokana pandaharam-potoananao izay famokarana manokana hanaraka ny mba famokarana araka ny fandoavam-bola, mba hitsena ny PCB famokarana sy ny fivoriana fitakiana.
Manana fahaizana ambany hizaha toetra ny pcba.
Mampiasa vacuum sy ny baoritra mba mamatotra ny fananana, mba hiantohana rehetra tonga aminao dia afaka tanteraka.
7.Deliver Ary manompo
Afaka mifidy izay mazava fa ianao dia manana orinasa amin'ny kaonty, na ny kaonty, fa mavesatra fonosana, seaway fandefasana entana dia ho hita koa.
Rehefa mahazo ny pcba, aza adino ny mijery sy hizaha toetra azy,
Raha misy olana, mandray ny hifandray antsika!
Q1: ianao, na ara-barotra ny orinasa orinasa?
A1: Misy efa-ny ny PCB orinasa mpamokatra entana & Antenimieram orinasa.
Q2: Inona ny ambany indrindra mba be?
A2: Ny MOQ Tsy mitovy mifototra amin'ny zavatra samy hafa. Madinika baiko ihany koa ny tonga soa.
Q3: inona no tokony hanatitra rakitra?
A3: PCB: Gerber rakitra no tsara, (Protel, fahefana PCB, fisaka sy mivelatra Sary), PCBA: Gerber rakitra sy Bom lisitra.
Q4: No PCB rakitra / GBR rakitra, ny PCB ihany no santionany, azonao mamokatra izany ho ahy?
A4: Eny, afaka manampy anareo izahay mba Clone ny PCB. Mandefa ny santionany fotsiny PCB ho antsika, dia afaka Clone ny PCB famolavolana sy miasa avy aminy.
Q5: Inona no fanazavana hafa dia tokony ho natolotra afa-tsy rakitra?
A5: manaraka fepetra arahana ilaina ho an'ny teny nindramina:
a) Base fitaovana
b) Board hatevin'ny:
c) Copper hatevin'ny
d) toetrany fitsaboana:
e) loko ny solder saron-tava sy ny silkscreen
Q6: Tena afa-po aho rehefa namaky ny vaovao aho, ahoana no ahafahako manomboka mividy ny filaminana?
A6: Mba andefaso olona ao amin'ny pejy fandraisana ny varotra an-tserasera, misaotra anao!
Q7: Inona no atao hoe fanaterana teny sy ny fotoana?
A7: matetika isika sy mampiasa FOB teny an-tsambo ny fananana in 7-15 ny andro amin'ny arakaraka ny filaminanareo dia be, customization.
Fivoriambe Rogers PCB
Henjana PCB 0.1mm
Henjana PCB 0.2mm
Rogers PCB faritra Board Reverse Engineering W ...
Simple Rogers faritra PCB Board Reverse Engine ...
Rogers PCB faritra Board Reverse Engineering C ...
Resin plug Hole Rogers Single misy rindrina PCB Circuit ...
Finday: +86 755 2332 9221
Address: 509 ZhongYang Building, No.24 FuHai Road, FuYong, Bao An, Shenzhen, Guangdong, Sina 518103
Flex hentitra PCB, Customized Rigid-Flex PCB, Fr4 Flex PCB, Hentitra-Flex PCB Board, Hentitra-malefaka PCB, Rogers PCB ,